घरडेरामै पुगेर राहत बाँड्दैछ भक्तपुर नगरपालिका – Health Post Nepal
घरडेरामै पुगेर राहत बाँड्दैछ भक्तपुर नगरपालिका
२०७७ वैशाख ३ गते ११:१४
काेराेना भाइरसकाे संक्रमण राेकथामका लागि सरकारले लकडाउन फेरि थप गरेकाे छ। परीक्षणकाे दायरा बढाएसँगै देशमा संक्रमितकाे संख्या पनि बढिरहेकाे छ। राजधानीकै एउटा अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका दुईजनालाई संक्रमण पुष्टि भइसकेकाे छ। लकडाउनबाट खासगरी दिनभरि मजदूरी गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने वर्गलाई समस्या परिरहेकाे छ। यस्ताे अवस्थामा उनीहरुलाई राहत तथा समग्र नगरबासीका लागि भक्त्तपुर नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेकाे छ भन्ने विषयमा हेल्थपाेस्ट नेपालका अशाेक अधिकारीले नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग कुराकानी गरेका छन्-
भक्तपुर नगरपालिकामा राहत वितरणको कार्य कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ?
प्रथम चरणमा वडा–वडामा अति विपन्न, असहाय, ज्याला मजदुरी गरिखाने श्रमिकहरूको सूची तयार गर्‍यौँ। सूचीमा नाम भएकाहरूको अवस्था बुझ्न घर–घरमै गएर परीक्षण पनि गर्‍यौं। बैङ्कमा पैसा छैन, सहकारीका पैसा छैन, मासिक रूपमा आम्दानी छैन, सरकार वा कुनै जागिर छैन भनेर स्वघोषणा गर्नेहरूको अवस्था पूर्ण रूपमा बुझ्यौँ। र, २ हजार ६ सय जना जतिको लिस्ट बनायौँ। २–३ घण्टाभित्र घरघरमै पुर्‍याएर राहत सामग्री वितरण गर्नुभयो साथीहरूले। वडाअनुसार ३ वटादेखि ५–६ वटासम्म गाडी राखेर सबैलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको हो। राहत वितरणको कार्य तुरून्त सकियो।
विशेषतः राहत वितरण कस्ता व्यक्तिहरूलाई गर्नुभयो? आर्थिक स्रोत नभएकाहरूसँगै बाहिरबाट आएर डेरामा बस्नेहरूलाई पनि दिनुभयो?
दुवै किसिमका छन्। बाहिरबाट आएर बसेकाहरूलाई पनि यो अवस्थामा समस्या नै छ। यहाँका स्थानीय पनि केही छन्। समस्यामा परेका कोही भएमा हामीले अस्तिबाटै राहत सामग्री वितरण गरेको थियौँ। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र बस्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन हामी विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्दैछौँ।
कुन वर्गका नागरिक चाहिँ बढी प्रभावित रहेछन्?
भक्तपर नगरभित्र विशेषतः विद्यार्थीहरू सम्भवतः घर गइसकेका होलान्। धेरैजसो चाहिँ श्रमजीवी, मजदुर वर्गकै मानिस रहेका छन्। सिकर्मी, डकर्मी, डेलागाडा चलाउनेहरू नै बढी प्रभावित छन्।
राहत सामग्री अन्तर्गत के–के बाँड्दै हुनुहुन्छ?
दुई जनाको परिवारलाई १० किलोग्राम चामल राखिदिएका छौँ। दुई जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य भएमा २० किलो राखिदिएका छौँ। दाल सबैलाई एक–एक किलो नै दिने गरिएको छ। चिउरा ३–३ किलो छ। तेल आधा र एक लिटरको छ। साबुन राखिदिएका छौँ। र, नूनसहित ६ वटा सामग्री वितरण गरिएको छ।
वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न र सचेतना अभियान कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ?
जिल्ला प्रशासनले भक्तपुरभरि हेरिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरबासीकै हितमा काम गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउनका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। टोल–टोलमा, ठाउँ–ठाउँमा ४ सय लिटर, ५ लिटरदेखि ७ सय लिटरसम्मका ट्याङ्कीहरू राखिएको छ। साबुनको प्रबन्ध गरिएको छ। ठाउँ–ठाउँमा क्लोरिनयुक्त पानी छरिदिएका छौँ। उत्पादक किसानको तरकारी खेर नजाओस् र उपभोक्ताले पनि खान पाउन् भनेर २५ ठाउँमा तरकारी बेच्ने स्टल तोकिएको छ। बिहानैदेखि माइकिङको व्यवस्था गरेका छौँ। फोहोर संकलन गर्ने १० वटा गाडी छन्। १० वटै गाडीमा माइकिङ गराउँछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौँ। ठाउँ–ठाउँमा भिडियो स्क्रोल बोर्ड राखेर विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेको संक्रमित, मृतकको अपडेट गरिदिएका छौँ। घर–घरमै गएर फोहोर संकलन गर्दा र छुट्टै माइकिङको व्यवस्था गरिएकाले सचेतना अभियान प्रभावकारी भएको छ। अरू बेलाभन्दा अहिले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएका छौँ। वडा समन्वय समिति गठन गरेर वडासम्म नै पुगिरहेका छौँ। कसैले सहयोग गर्न चाहेमा एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भएकाले नगरपालिकाको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लकडाउनको पालनाका सम्बन्धमा नगरबासीका साथ कत्तिको पाउनु भएको छ?
नगरबासीको उत्साहजनक र महत्त्वपूर्ण साथ छ हामीलाई। तरकारी तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि निश्चित समय तोकिएको छ। २० हजार घरहरू रहेछन्। प्रत्येक घरमा हामीले पास दिएका छौँ। तरकारी र अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नुपरेमा पास देखाएर जानुपर्छ। पास नभएकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ। र, उभ्याइराखेको छ। पर्चाहरू पनि घर–घरै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी प्रशासनसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले के–कस्तो तयारी भइरहेको छ?
भक्तपुरमा अहिले बिस्केट जात्रा चलिरहेको छ। चैत २७ गतेदेखि वैशाख ५ गतेसम्म हुने हो। सामान्य पूजाआजा मात्रै गरेर सक्न आग्रह गरेपछि अहिले त्यही अवधारणामा काम भइरहेको छ। सर्वसाधारण, नगरबासी बाहिर निस्किएका छैनन्। अलिअलि निस्किए पनि प्रशासन, जनप्रतिनिधि साथीहरू र स्थानीय अगुवाहरूले सम्झाइबुझाइ गरिरहनु भएको छ। जनस्वास्थ्य नगरकै भएको हिसावले पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपिई लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौँ। नगरपालिकाभित्र रहेका ६ वटा अस्पतालहरू आइसोलेसन वार्ड निर्माणको आग्रह गरेर सबै अस्पतालमा त्यो बन्दोबस्त गरिएको छ। जुनसुकै बेला पनि आवश्यक परेमा दमकल जसरी नै जाने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ।
यो सबै काम सम्पन्न गर्न र व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो टिम निर्माण गर्नु भएको छ?
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अति विपन्न, असंगठित श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाले वडाध्यक्षको नेतृत्वमा राहत वितरण टोली बनाएको थियो। वडा १ का ४ सय १० परिवार, वडा २ मा २ सय ३, वडा नम्बर ३ मा एक सय परिवार, वडा नम्बर ४ मा २ सय २० परिवार, वडा नम्बर ५ का १ सय ५० परिवारको सूची तयार गरी राहत वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर ६ का १ सय ५० परिवार, वडा नम्बर ७ का एक सय ६० परिवार, वडा नम्बर ८ मा ४ सय २० परिवार र वडा नम्बर १० मा ६ सय ७५ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। यसको नेतृत्व वडाअध्यक्षहरू श्यामकृष्ण खत्री, हरिप्रसाद बासुकला, राजकृष्ण गोरा, कृष्णलक्ष्मी दुवाल, प्रेमगोपाल कर्माचार्य, हरिराम सुवाल, उकेश कवा, महेन्द्र खायमली, जगतलाल मानन्धर, छोरीमैयाँ सुजखू र लक्ष्मीप्रसाद ह्यौमिखाले गरिरहनु भएको छ। राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडामा ५० जना जति स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो।
2 thoughts on “घरडेरामै पुगेर राहत बाँड्दैछ भक्तपुर नगरपालिका”
याे लकडाउनकाे समयमा मात्र होइन कि विगतका दिनहरुमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले गरिब, किसान र मनदुकाे हितमा निस्वार्थ र निष्पक्ष ढंगले जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ । तर कतिपय नेपाली जनताहरुले यस्ता खालका गुणहरु बुझिरहेकाे छैन, र अन्त एउटा जिज्ञासा राख्दैछु कमल विनायक नगरकाेट बसपार्कमा र कमल पाेखरी परिसर फुटपाथमा तरकारी व्यापारी बढेकाे सामान्य दिनमा भन्दा बढेकाे देखिन्छ, जहाँसम्म कि लकडाउन भन्दा पहिलेे अन्य पेसामा आबद्ध हुनेहरु पनि यतिबेला तरकारी व्यापारमा व्यस्त छन्, त्यस अर्थमा हाल फैलिएको काेराेणा भाईरसकाे संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि यस्ता खाल्का व्यापारीलाई पनि नराख्न सुझाब दिने हाे ?
भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको कामले मलाई यस नगरको वासिन्दा हुन पाउदा एकदमै खुसी लागेको छ।